News - Igwe na-acha anyanwụ: ụzọ maka nkwado
Ike anyanwụ na-ekere oke oke na ọgụ megide mgbanwe ihu igwe.
Nkà na ụzụ nke anyanwụ nwere ike inyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ịnweta ọnụ ala, obere, na ike dị ọcha iji belata ịda ogbenye na ịbawanye ndụ. Ọzọkwa, ọ nwekwara ike ime ka mba ndị mepere emepe na ndị kachasị bụrụ ndị na-ere mmanụ ọkụ, gbanwee maka oriri ike na-adigide.
“Enweghị ìhè mgbe chi jiri bụ otu ihe kachasị eme ka ụmụ nwanyị nwee mmetụta nke enweghị nchekwa na obodo ha. Mepụta sistemụ ndị nwere ike ịpụta na mbara igwe na-enyere aka ịgbanwe ndụ ndị mmadụ na obodo ndị a. Ọ na - agbatị ụbọchị ha maka azụmaahịa, agụmakwụkwọ, na ndụ obodo, ”ka Prajna Khanna kwuru, onye isi CSR na Signify.
Site na 2050 - mgbe ụwa ga-anọpụ iche - a ga-ewu akụrụngwa ọzọ maka mmadụ ijeri abụọ ọzọ. Ugbu a bụ oge maka akụnụba na-emepe emepe ka ọ ghọọ teknụzụ mara amamịghe, na-agabiga nhọrọ ikuku carbon, maka ndị na-ehicha ihe ikuku carbon pụrụ ịdabere na ya.
BRAC, NGO kacha ibu n'ụwa, na ndị ọrụ Signify kesara ihe karịrị ezinụlọ 46,000 n'ogige ndị gbara ọsọ ndụ nke Bangladesh - nke a ga - enyere aka mee ka ndụ ka mma site na ịkwado mkpa ndị dị mkpa.
"Igwe ọkụ ndị a dị ọcha ga-eme ka ogige ndị ahụ bụrụ ebe dị nchebe karị n'abalị, wee bụrụ, na-enye onyinye dị oke mkpa maka ndụ ndị mmadụ na-etinye ụbọchị na nsogbu ndị a na-enweghị atụ," ka onye isi oche nke Strategy, Communication and Empowerment kwuru. na BRAC.
Dika ọkụ nwere ike inwe mmetụta dị mma na-enwe ogologo oge na obodo ma ọ bụrụ na enyere ọrụ ndị achọrọ iji kwado teknụzụ ndị a, Signify Foundation na-enye ndị otu n'ime ime obodo ọzụzụ ọrụ aka yana yana inye aka na mmepe azụmaahịa iji kwalite nkwado nke azụmaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Na-enwu ìhè n’ezie uru nke ike anyanwụ dị
Zere ịrụ ọrụ na mmezi ụgwọ (ofu na agbanwe)
Izere mmanụ ọkụ.
Izere ikike ọgbọ.
Izere ikike idobere (osisi ndị dị na njikere nke na-agbanye ma ọ bụrụ na ịnwere, dịka ọmụmaatụ, nnukwu ibu ntụ oyi na ụbọchị ọkụ).
Zere ikike nnyefe (ahịrị).
Ọnọdụ ụgwọ ọrụ gburugburu ebe obibi na ahụike metụtara ụdị nke ọgbọ eletrik na-emetọ.
Solar Street Light, Anyanwụ Inverters, Gbanyụọ Grid Inverter, Ogige Uhie Mbara Igwe, Solar Iju Mmiri Light, Ọkụ Anyanwụ n'èzí,